कोरोना संक्रमित सुरक्षाकर्मीको पीडा : पत्नी र परिवारलाई ढाँटेर आइसोलेसनको बास
लामो ‘लकडाउन’ले रोजगारी गुमेपछि भारतका विभिन्न शहरमा मजदुरी गर्ने नेपाली घर फर्किने लहरले सीमा नाकामा भीडभाड थामिसक्नु थिएन । उच्च जोखिम मोलेर सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी काममा खटिएकै छन् ।
सीमा नाका हुँदै नेपाल छिर्न खोज्नेलाई कुनै व्यक्तिगत सुरक्षाका उपकरण विनै सम्झाइबुझाई, धकेलेर हुन्छ कि लाठीचार्ज गरेर रोक्नुपर्ने बाध्यता प्रहरीको थियो र छ पनि !
कपिलवस्तुको कृष्णनगर, सुठौली नाकामा भारतबाट आएका नेपालीको भीड ठेलमठेल सँगसँगै बढ्दो कोरोना संक्रमण पनि । कपिलवस्तुसहित तराईका जिल्लामा भारतबाट आएका व्यक्तिहरूमा कोरोना संक्रमण देखिने क्रम तीब्र थियो ।
कपिलवस्तुको ईलाका प्रहरी कार्यालय कृष्णनगरमा कार्यरत सुरक्षाकर्मी पनि जोखिममा रहेको भन्दै वैशाख २७ गते नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान र कृष्णनगर नगरपालिका कर्मचारीसहित ५० जनाको कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) जाँच गर्न स्वाब (थुक र खकार) संकलन गरी पठाइयो । स्वाब दिएर पनि सुरक्षाकर्मीहरू निरन्तर सीमामा ड्युटीमा खटिएका थिए । कुनै लक्षण नहुँदा कोरोना लागेको होला भन्ने शंका पनि थिएन ।
वैशाख ३० गते साँझ ८ बजेतिर खाना खाएर बसेको बेला जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दीपशम्सेर राणाको फोन आयो । कृष्णनगरमा ८ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएकाले सतर्क रहनुहोला भनेर जानकारी दिइयो । एसपी सा’पले दिएको अनपेक्षित जानकारीले सबै छक्क परे ।
‘हामी सबै आइसोलेसनमा छौं । घरबाट फोन गरेर सुरक्षाकर्मी पनि संक्रमित भए को हुन् भनेर सोध्छन् । खै अरु कोही होलान्, हामीलाई थाहा छैन । ड्युटीमै छु । काम गरिरहेको छु । भीडभाड छ । साँझ फोन गर्छु भनेर श्रीमती र परिवारलाई ढाँटेको छु,’ उनले भने । आफूलाई संक्रमण भएपनि परिवारलाई जानकारी दिएर तनाव दिन नहुने उनको बुझाइ छ ।
संक्रमितहरू होटलमा बनेको आइसोलेसनमा बिहान उठेर शारीरिक व्यायाम गर्छन्, त्यसपछि नुहाइधुवाई गर्छन् अनि चिया नास्ता खान्छन् । खाना खान्छन् । संक्रमितहरूलाई प्रहरी कार्यालयबाट खाना ल्याइदिने गरिएको छ । साँझ अदुवा, बेसार, गुर्जो, लसुनपानी लगायतको समिश्रणको तातोपानी बनाएर खान्छन् । हालसम्म कसैलाई पनि कोरोनाको लक्षण देखिएको छैन । संक्रमितबीच आपसमा देखादेख हुन्छ तर नजिक पर्दैनन् ।
‘कोरोना सजिलै जितिन्छ, मनोबल उच्च छ,’ एक संक्रमितले भने, ‘आइसोलेसनमा बसेको यत्रो दिनसम्म एक पटक पनि न डाक्टर भेट्न आए, न कसैले तापक्रम नापे, दुःख लागेको छ ।’ चिकित्सक नआएपनि दैनिकजसो जिल्ला प्रहरी प्रमुख र सीडीओले फोन गरेर आराम गर्नुहोस् निको हुन्छ भनेर आत्मबल बढाउने गरेका छन् । संक्रमितहरूको पछिल्लो रिपोर्ट ५ दिनअघि ‘नेगेटिभ’ छ । अर्को स्वाब रिपोर्ट पनि नगेटिभ आएपछि निको भएर डिस्चार्ज हुनेछन् ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत कार्यरत संक्रमितमध्ये एक जनाले सामाजिक दूरी कायम गर्दागर्दै पनि कहाँबाट कोरोना संक्रमित भयो पत्तो पाउन नसकेको बताए । उनले भने, ‘कामको सिलसिलामा कहिले कृष्णनगर, कहिले विजयनगर गएर क्वारेन्टाइनमा कति थपिए, कति घर गए भन्ने नगरपालिकासँग डाटा लिन जानुर्पथ्यो । कति जनालाई आरडीटी पोजेटिभ देखियो ? कति जनालाई पीसीआर जाँच गर्दा पोजेटिभ आयो ? सबै डाटा लिनुपर्थ्यो । काम गर्दा डिस्टेन्स त कायम गरिएको जस्तो लाग्थ्यो । कसरी सर्‍यो । कसरी ?’ जोखिममा काम गर्ने सबै कर्मचारी, प्रहरी र नेपाली सेनाको पीसीआर जाँच गर्नुपर्ने उनले बताए ।
कपिलवस्तुमा सुरक्षाकर्मी, नर्स, नगरपालिकाका कर्मचारी, पत्रकार र अन्य गरी १०० जनाभन्दा बढीमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ ।
स्याङ्जाको कालीगण्डकीमा पहिरो, ३ को मृत्यु १ बेपत्ता...